Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny fanarenana ny fizahan-tany ao Jamaika dia mila valiny sy fiaraha-miasa matanjaka amin'ny sehatra maro
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia manentana ireo mpanao politika eran-tany sy isam-paritra hampiasa fomba fiasa vaovao, fiaraha-miombon'antoka ary valiny matanjaka amin'ny sehatra maro hanampiana ny fanarenana io sehatra io noho ny valanaretina COVID-19.
Nilaza ny minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika fa ara-tantara dia naneho fahaiza-manao matanjaka hifanaraka sy hanavao ary hiarina amin'ny fitsapana ny fizahantany.
Ny mpanao politika, ny mpitarika indostria, ny mpampiasa vola, ny andrim-bola ary ny mpamatsy vahaolana vaovao dia takiana mba hiaraha-miasa akaiky kokoa.
Tsy maintsy atao ny famatsiam-bola hananganana fotodrafitrasa hanamorana ny fizahan-tany maharitra sy ny fanjifana angovo maharitra.
Nanamarika ny minisitra fa ity paikady ity dia hiantoka ny sehatry ny fizahan-tany hatanjaka kokoa, maharitra, tafiditra ary mifaninana mandritra ity vanim-potoana fanarenana fizahan-tany any Jamaika ity.
Niresaka vao haingana nandritra ny Forum Infrastructure Caribbean (CARIF), i Bartlett: "Raha teo amin'ny tantara dia nampiseho fahaiza-manao matanjaka ny fizahan-tany, manavao ary miverina amin'ny fotoam-pisedrana, ity toe-javatra tsy mbola nisy toa azy ity dia mitaky fomba vaovao sy valiny ary fiaraha-miasa matanjaka amin'ny sehatra maro hanatrarana ny sasany amin'ireo tanjontsika amin'ny fanarenana ambony kokoa. ”
Nomarihiny ihany koa fa, "ny mpanao politika, ny mpitarika indostria, ny mpampiasa vola, ny andrim-panjakana ara-bola ary ny mpamatsy vahaolana vaovao dia takiana amin'ny fiaraha-miasa akaiky kokoa hanamafisana sy hiantohana ireo famatsiam-bola ilaina amin'ny fananganana fotodrafitrasa izay manamora ny fizahan-tany maharitra sy ny fanjifana angovo maharitra eo amin'ny fizahantany sehatra. ”
Raha ny filazan'ny minisitra Bartlett ny tetezamita mankany amin'ny fizahan-tany maharitra dia miankina ihany koa amin'ny fitarihana ny fampandrosoana ny fizahan-tany amin'ny paikadim-pirenena misy ny rafitra politika, ny rafitra mifehy ary ny andrim-panjakana miaraka amin'ny fandrisihana ampy handrisihana ny fampandrosoana ny famatsiana sy ny fahaiza-manao mamokatra izay misy ny entana sy serivisy maharitra manahy.
"Ity fomba fizahana fizahan-tany maharitra ity dia tsy maintsy dinihina amin'ny fomba fijerin'ny faritra ihany koa ary tokony hampidirina paikady hamenoana ny banga amin'ny lafiny famatsiana ny fizahantany Karaiba. Noho izany, ny toerana any Karaiba dia mila mandray fepetra stratejika mba hahazoana antoka hitazonana ny dolara amerikana bebe kokoa izay mivoaka mankamin'ny faritra vokatry ny fizahan-tany, ”hoy izy.